Waa cusub oo u baryay magaalada Dhuusomareeb iyo ciidan ka socda AMISOM oo galay magaalada – Bandhiga
Waa cusub oo u baryay magaalada Dhuusomareeb iyo ciidan ka socda AMISOM oo galay magaalada
Magaalada Dhuusomareeb ee xarunta maamul goboleedka Galmudug waxaa maanta gaaray ciidan katirsan kuwa AMISOM gaar ahaan kuwa ka socda Jabuuti.
Waxaa soo dhaweyn diiran loogu sameeyay duleedka magaalada Dhuusomareeb, waxaana ciidankan xalay ku hoyden inta u dhaxeysa Degmooyinka Guriceel iyo Dhuusamareeb halkaa oo saakay u ruuqaansadeen dhanka Magaalada Dhuusamareeb.
Duleedka Magaalada Dhuusomareeb waxaa ku soo dhaweeyay Musuuliyin ka tirsan Dowlada Faderaalka Soomaaliya,Saraakiisha Ciidamada heer faderaal iyo heer Dowlad Goboleed, Maamulka degmada Dhuusamareeb iyo Shacabka Magaaladaasi.
Gudoomiyaha Degamada Dhuusamareeb Macalin Nuur Cilmi Cabdulle oo ugu horay Soo dhaweeyay Ciidanka AMISOM ayaa sheegay in aysanjirin Baahi amni balse Ciidanka loo dalbay in ay qayb ka qaataan Xoraynta deegaanada Maamulka Galmudug ee Al shabaab Maamulaan.
Waxaa magaalada Dhuusomareeb laga dareemayaa jawi ka duwan sidii hore iyo ciidamo isdhaafaya.
Sen Jawaahir Axmed Cilmi iyo Xildhibaan Cabdixakiin Macalin Axmed sheegtay in looga baahanyahay Hiilwalaaltinimo Ciidanka Jabuuti ayna ku soo dhaweynayaan Magaalada Dhuusamareeb.
Taliye u hadlay ciidamada Jabuuti ayaa sheegay iney diyaar u yihiin garab istaagidda shacabka iyo maamulka Galmudug sidii looga xoreyn lahaa deegaanada ay kaga sugan yihiin Al shabaab.